डा. सा’बः ६ महिनापछि ‘वान्स मोर, की नो मोर’
नारायण पौडेल , २१ फाल्गुन २०७६, बुधबार, ०३:१५ pm
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी ओलीका लागि डा. युवराज खतिवडा कति महत्वपूर्ण व्यक्ति हुन भन्ने बुझ्न अब अरु कुनै तथ्य खोजिरहनु परेन् । ‘२०७४ फागुन ८ गते राष्ट्रिय सभा सदस्य र फागुन १४ गते अर्थमन्त्रीको जिम्मेवारी, त्यसपछि अहिले पुनः अर्थमन्त्रीका रुपमा निरन्रतता’, यति घट्नाक्रम हेरिसकेपछि ओलीको नजरमा खतिवडाको तस्विर कस्तो छ भन्ने प्रष्टै हुन्छ ।
ओलीले खतिवडाका लागि आफ्नै अध्यक्षतामा बसेको सचिवालय बैठकको निर्णय नमान्ने अठोट गरे । बरु सचिवालयका नेताहरुलाई ‘परेको व्यहोर्छु’ सम्म भन्न भ्याए । फागुन १४ गतेको सचिवालय बैठकले गरेको निर्णय नमान्ने ओली अडानले उनको सत्तालाई हल्लाउने अवस्था आएको थियो तर ओली टसमस भएनन् र अन्ततः बिचको बाटो रोज्ने निष्कर्ष निस्कियो । जस अनुसार हालसम्म सार्वजनिक भएका सूचनालाई आधार मान्ने हो भने राष्ट्रिय सभामा बामदेव गौतमलाई नै लैजाने र अर्थमन्त्रीमा डा. खतिवडालाई निरन्तरता दिने भन्ने नै हो ।
ओलीले आफुलाई तत्कालिन नेकपा(एमाले)को अध्यक्ष निर्वाचित गराउन महत्वपूर्ण भूमिका खेलेका गौतमको साटो डा. खतिवडालाई त्यसै च्यापेनन् होला ।
ओलीलाई ओली बनाउन सघाउने बिष्णु पौडेल, प्रदिप ज्ञवाली पनि अर्थ मन्त्री बन्न चाहान्थे । तत्कालिन एमालेका महासचिव ईश्वर पोखरेल त अन्तिम समयसम्म अर्थमन्त्री बन्ने प्रयास मै थिए । यी बाहेक माधव नेपाल नेतृत्वको सरकारमा अर्थमन्त्री बनेर सफल दरिएका र प्राक्टिकल अर्थ राजनीतिक व्यक्तित्वको छवि बनाएका सुरेन्द्र पाण्डेले पनि कसरत नगरेका होइनन् । तर पनि ओलीले डा. खतिवडालाई नै काखी च्यापे । हुनतः यतिबेला कोशी पूर्वकाहरुको भाग्य चम्किएको छ पनि भनिन्छ । त्यसमा पनि झापालीहरु कोही बेरोजगार बस्नु पर्दैन भन्ने पनि सुनिन्छ तर ओलीले खतिवडालाई पक्कै पनि झापाली भएकै कारण च्यापेका होइनन् ।
ओली शासनमा खातिवडा खास
नेकपाले चुनावी घोषणा पत्रमा ‘समृद्ध नेपालः सुखी नेपाली’को नारा अघि सारेको थियो । पछिल्लो केहि समयदेखि ओलीले आफुलाई ‘विकास पुरुष’का रुपमा परिचित गराउने प्रयास पनि गर्दै आएका थिए । देश विकास गराउन वित्तिय अनुशासन, उत्कृष्ठ आवधिक योजनाहरु, कर्मचारीहरुको परिचालन र दातृ निकायहरुलाई विश्वासमा लिन सक्ने क्षमता जस्ता गुण आवश्यक पर्छ भन्ने तथ्यसँग ओली भलिभाँती जानकार थिए ।
यी सबै काम गर्न सक्ने पात्र सुरेन्द्र पाण्डे हुन सक्थे तर उनी ओली गुटका थिएनन् । आफ्नो कोर गुट भन्दा बाहिरका मान्छेलाई त्यसरी जिम्मेवारी दिन सक्ने अवस्थामा ओली थिएनन् । त्यसकारण उनले रोज डा. खतिवडा ।
नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नरका रुपमा वित्तिय क्षेत्रको ज्ञान र कर्मचारी प्रशासन चलाएको अनुभव, राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्षका रुपमा आवधिक योजना बनाउन सक्ने अनि यी दुबै निकायमा बसेर काम गर्दा दातृ निकायहरुसँग स्थापित गरेको सुमधुर सम्बन्ध । यी गुणका अलवा डा. खतिवडासँग भएको अर्काे गुण पनि थियोः झापाली । यी र यस्तै गुणहरुका कारण ओलीका लागि ‘खतिवडा खास’ बन्न सकेको हुन् ।
पार्टी पंत्तिको अपनत्व
डा. खतिवडा विज्ञ हुन, तर उनले चलाएको अर्थमन्त्रालय प्रति नेकपा पंक्तिले अपनत्व ग्रहण गर्न नसकेको सूचना स्वयं प्रधानमन्त्री ओलीसम्म पनि पुगेको छ । त्यस सूचनाका आधारमा ओलीले डा. खतिवडाका व्यवहार जन्य पक्ष सुधार गर्ने आश्वासन सचिवालयका नेताहरुलाई दिलाएका थिए । त्यसो त खतिवडालाई ‘कर मन्त्री’को उपमा दिएर नेकपाकै कार्यकर्ता पनि खोईरो खनिरहेका देखिन्छन् । लोकतन्त्रमा सरकारले लिएका नीति कार्यक्रमहरुको अपनत्व कार्यकर्ताले ग्रहण गर्ने र तिनै कार्यकर्ता मार्फत नागरिकसम्म पुर्याउँदै जनमत बढाउने गरिन्छ ।
तर डा. खतिवडाले अघि सारेका कार्यक्रमहरुमा पार्टी पंक्ति र कार्यकर्तामै असन्तुष्ठि रहेको बताइन्छ । त्यसको कारण भनेको खतिवडाको कार्यशैली नै हो । उनी हत्तपत्त कसैका कुरा सुन्दैनन् । गुनासो गर्न पुगेकाहरुलाई उल्टै प्रवचन दिएर पठाउँछन भन्ने आरोप छ । उनले पार्टी पंक्तिलाई आफ्ना कार्यक्रमबारे बुझाउन सक्नुपर्छ ।
उद्योगी व्यवसायीका कुरा
नेकपा निकटकै उद्योगी व्यवसायीले समेत डा. खतिवडालाई रुचाईरहेका छैनन् । त्यसका दुई वटा कारण हुन सक्छन् । पहिलो कारण भनेको हिजो जसरी उद्योग व्यवसाय सञ्चालन गरिएको थियो, जसरी छिद्रहरुको उपयोग गरिन्थ्यो, आज त्यो रोकिएर पनि हुन सक्छ । दोश्रो, खतिवडाले आफ्ना कुरै नसुनेर नि हुन सक्छ । हुनतः उनले कोही उद्योगी व्यवसायीसँग एक्ला एक्लै भेट्दिन भनिरहेका हुन्छन् । आफ्ना माग लिएर सामुहिक रुपमा आउन भनिरहेका हुन्छन् । तर लगानी गर्ने उद्योगी व्यवसायी नै चिडिए भने समृद्धि सपना पुरा हुन्न भन्ने तथ्यलाई पनि बिर्सन हुन्न ।
यद्यपी पछिल्लो समय खतिवडाले ‘अरुको कुरै नसुन्ने’ आरोप भने चिर्दै आईरहेका छन् । केहि महिना अघि मात्रै उनले धनगढीदेखि झापासम्म एक दर्जन भन्दा बढी उद्योग बाणिज्य संघ संगठनका कार्यक्रममा सहभागीता जनाएका थिए । पछिल्लो समय उनले बैंकर्स एसोसियसनसँग घनीभूत छलफल गरे । सार्वजनिक कार्यक्रममा जान खासै नरुचाउने छवी भएका डा. खतिवडाले त्यसलाई चिर्न थालेका छन् । डा. खतिवडाले अघि सारेका आर्थिक नीति तथा सुधारका कार्यक्रम प्रति कसैले सिधै औला उठाईरहेको अवस्था छैन् । खाली सबै खाले सुधार एकै पटक गरियो, विस्तारै गर्दा हुन्थ्यो भन्ने आसय मात्रै निजी क्षेत्रबाट व्यक्त भएको देखिन्छ ।
सञ्चार माध्यमसँगको सम्बन्ध
खतिवडाले यसबिचमा सुधार्नै नसकेको पक्ष भनेको सञ्चार माध्यमसँगको सम्बन्ध हो । उनले मिथ्यांकमा टेकेर आफु र सरकार विरुद्द भ्रम फैलाईएको आरोप लगाउँदै आएका छन् । यस्तो घेरा बन्दीलाई चिर्न उनले सूचनाहरुको सहि सम्प्रेषणको व्यवस्था मिलाउनुपर्छ । त्यस बाहेक गुण र दोषका आधारमा समर्थन र खबरदारी गर्ने कोर टिम पनि बनाउनु आवश्यक छ जसले निश्चित समय अवधी भित्र उनलाई सुझाव दिने र सच्चिने काममा सहयोग गरोस् । उनले नियतबस आफु र सरकार विरुद्ध लेख्नेहरु र गुण दोषका आधारमा सूचना सम्प्रेषण गर्नेहरुको पहिचान गरेर सोही अनुसारको रणनीति बनाउनुपर्छ । कम्युनिष्ट पार्टीको कार्यकर्ता र मन्त्री भएपछि त्यहि अनुसारको प्रचार रणनीति बनाउनुपर्छ । साथै, आफ्नो प्रेस सल्लाहकारको टिमलाई पनि थप बजबुत बनाउनु आवश्यक छ ।
‘वान्स मोर, की नो मोर’
यतिबेला व्यापक आलोचनाका बीच केपी ओलीले डा. युवराज खतिवडालाई अर्थमन्त्रीमा निरन्तरता दिएका छन् । अब डा. खतिवडाले २ वर्षे कार्यकालको लेखाजोखा गरेर आफ्ना व्यवहारजन्य कमजोरीलाई सुधार गर्दै ६ महिनापछि ‘नो मोर होइन, वान्स मोर’ भन्ने वातावरण बनाउनुपर्छ ।
राष्ट्रिय सभामा बामदेव गौतम, अर्थमन्त्रीमा डा. खतिवडा निरन्तर
अर्थमन्त्री, गर्भनर र बामदेव गौतमको नियुक्ती अन्यौलमा, तीनै पद खाली हुँदै
गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माण कार्य प्रभावित, १० प्रतिशत काम अझै बाँकी
नेपाली रोटरियनबाट कोरोनाविरुद्ध रु. एक करोड सहयोग
यी बैंकका यी शाखा आज खुल्दैछन्, हेरौँ सूची